Nhau dzeBhaibheri: Utapwa muBhabhironi Kusvikira Kukuvakwazve Kwamasvingo eJerusarema - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Vachingunoveri muutapwa muBhabhironi, vaIsraeri vakava nemiedzo mizhinji yokutenda kwavo. Shadraki, Meshaki naAbhedhinego vakakandwa muchoto chomwoto unopisa, asi Mwari akavabudisa vari vapenyu. Gare gare, pashure pokunge Bhabhironi rakundwa navaMedhe navaPersia, Dhanieri akakandirwa mugomba reshumba, asi Mwari akamudzivirirawo nokupfiga miromo yeshumba.
Pakupedzisira, mambo wePersia Koreshi akasunungura vaIsraeri. Vakadzokera kunyika yokwavo makore 70 chaiwo pashure pokuve vaendeswa Bhabhironi senhapwa. Chimwe chezvinhu zvokutanga zvavakaita pavakahwirira Jerusarema chaiva chokutanga kuvaka tembere yaJehovha. Zvisinei, vavengi vakakurumidza kumisa basa ravo. Nokudaro aiva anenge makore 22 pashure pokuhwirira Jerusarema apo pakupedzisira vakapedza tembere.
Gare gare, tichadzidza nezve rwendo rwaEzra rwokudzokera Jerusarema kundonatsa tembere. Apa paiva pamakore 47 pashure pokupedzwa kwetembere. Tevere, makore 13 pashure porwendo rwaEzra, Nehemia akabetsera kuvakwazve kwamasvingo akapwanywa eJerusarema. Chikamu CHECHISHANU chinofukidza makore 152 enhau kusvikira kunguva iyi.